Lehibena andrim-panjakana, mpikambana amin’ny governemanta, solontenam-panjakana isan-tsokajiny, Ampanjaka sy olobe avy amin’ny lafivalon’ny Nosy, Tangalamena, mpanao politika, olon-tsotra, miaramila… no tonga nankalaza izany. Ny 21 septambra dia efa nisy ny tsimandrimandry nentina niomanana tamin’ny fitsenana ny asaramanitra. Nisy moa ny tsangambato goavana natsangana ho marik'ity fiaraha-mankalaza ity taom-baovao Malagasy ity, ka vato mirefy 7m, milanja 12 taonina nalaina avy taty Antananarivo. Fanehoana ny firaisan'ny foko 18 misy eto Madagasikara ity. Efa tafajoro ilay vato no tapaka tampoka teny amin’ny lohany, izay soa ihany fa tsy nisy ny olona naratra na ny aina nafoy.Raha ny filazan’ny teknisianina dia tsy nety ny fomba nibatana sy nanaingana ilay vato izay diso voaray an-tendrony loatra ka izay no nahatapaka azy.Misy mihevitra koa anefa fa fambara zavatra izao vato vaky izao.